လွှမ်းပိုင်ရဲ့မွေးနေု့ကို ရိုဆန်ဆန်လေးဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ Bobby Soxer – XB Media Myanmar
လွှမ်းပိုင်ရဲ့မွေးနေု့ကို ရိုဆန်ဆန်လေးဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ Bobby Soxer
လွှမ်းပိုင်နဲ့ B Sox တို့ချစ်သူစုံတွဲလေးကတော့ ဂီတလောကရဲ့သက်တမ်းအရှည်ကြာဆုံးချစ်သူစုံတွဲလေးလို့ဆိုရမှာပါပဲ။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ လာမယ့် 2019 မေလ ဆိုရင် ချစ်သူသက်တမ်း (၁၀)နှစ်ပြည့်မြောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်သူတစ်ယောက်တည်းနဲ့ တစ်နှစ်ပြည့်ဖို့တောင်မလွယ်တဲ့ ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာ ဒီတစ်ယောက်တည်းနဲ့ ဘဝသက်တမ်းရဲ့တစ်ဝက်စာလောက် အတူဖြတ်သန်းနိုင်တာကတော့ အချစ်စစ်ရဲ့ပြယုဂ်ဖြစ်သလို လေးစားစရာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လွှမ်းပိုင်က Bobby Soxer ကိုအရမ်းချစ်သလို စိတ်ထက်တဲ့ B Sox ကလည်း လွှမ်းပိုင်ကိုတော်တော်လေးချစ်တာ ပရိသတ်တွေမြင်ရမှာပါ။ ဒါ့အပြင် လွှမ်းပိုင်နဲ့ B Sox က အခြားသူတွေလိုပြတ်လိုက်တွဲလိုက်တွေရန်ဖြစ်သံတွေလည်းမကြားပဲ တည်ငြိမ်ပြီး over မလုပ်တတ်တဲ့ စုံတွဲလေးဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ ဒီနေ့ မတ်လ (၁) ရက်နေ့ဟာ လွှမ်းပိုင်ရဲ့ အသက် (၃၀) ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပြီး ချစ်သူ Bobby Soxer က လွှမ်းပိုင်ကို ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးပေးထားပါတယ်။
Bobby Soxer က လွှမ်းပိုင်ရဲ့ မွေးနေ့ကိတ်လေးကိုင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့အတူ “မွေးနေ့ကိတ်ပေါ်မှာ အဲဒီဖယောင်းတိုင်တွေထွန်းဖို့မလိုတော့ပါဘူး.. ရှင်က ကျွန်မရဲ့နှလုံးသားကိုလောင်ကျွမ်းစေခဲ့ပြီးပါပြီ”လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာတန်းလေးနဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တာပါ။ B Sox က သူ့ရဲ့ account မှာ “Do you really need to light those candles on your cake? U’ve already set my heart on fire. Happy birthday”လို့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အီမိုိဂျီလေးတွေနဲ့တင်ထားခဲ့တာပါ။ လွှမ်းပိုင်ကတော့ချစ်သူလေးရဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းကြောင့်ပျော်နေမှာအမှန်ပါပဲ။ ဒါ့အပြင်လွှမ်းပိုင်ဟာ Justin Bieber နဲ့လည်းမွေးနေ့တူသူပါ။ ဒီနေ့ဟာ Justin Bieber ရဲ့ မွေးနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။
မြင်သူတကာ လည်ပြန်ငေးခဲ့ရတဲ့ အမိုက်စားဖက်ရှင်နဲ့ ပွဲတက်ခဲ့တဲ့ ​ဖွေးဖွေးရဲ့ပုံရိပ်တွေ